သင်၏အိမ်၊ ကားနှင့်ရုံးတွင် Hidden ကင်မရာများကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း။ | OMG Solutions
သင်၏အိမ်၊ ကားနှင့်ရုံးတွင် Hidden ကင်မရာများကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း။
သင်၏အိမ်၊ ကားနှင့်ရုံးတွင်လျှို့ဝှက်ကင်မရာကိုရှာဖွေရန်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လူအများကဤသီးသန့်တည်ရှိမှုစီးပွါးရေးအပေါ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှလူအများအပြားကဤတိုင်ကြားမှုကိုတိုင်တန်းကြသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရကြီးမားသော 11 ဖြေဆိုသူရာခိုင်နှုန်းသည်သူတို့၏အိမ်၊ ကား၊ ရုံးသို့မဟုတ်ဟိုတယ်တို့တွင်ဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ။ စောင့်ကြည့်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Technical Surveillance Countermeasures and Intelligence Expert ကသူ့အလုပ်၏ထိခိုက်လွယ်မှုကြောင့်သူ၏အမည်ကိုထုတ်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးသံMonာကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။ သူသည်ပconflictိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများရှိပုန်းကွယ်နေသောပစ္စည်းများကိုအမေရိကန်စစ်တပ်၏အထူးစစ်ဆင်ရေးအသိုင်းအဝိုင်း၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရှာဖွေခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုလျှို့ဝှက်ကင်မရာတစ်လုံးကိုရှာဖို့အကြံပေးတယ်။
၎င်းသည်တက်ကြွစွာထုတ်လွှင့်နေသည့်ကိရိယာကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်အတွက်ရေဒီယိုလှိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူအများစုတို့သည်၎င်းတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုပိုင်ဆိုင်လိုကြသည်။ သို့သော်လူအများအပြားသည်အခြားသူများ၏ privacy ကိုဖော်ထုတ်ရန်ပစ္စည်းများစွာကိုအသုံးပြုကြသည်။ လူအများအပြားသည်အခြားသူများ၏ privacy ကိုထိခိုက်စေသည့်ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများကြောင့်ပြင်ဆင်မှုများရှိနေသော်လည်းရေဒီယိုလှိုင်းစကင်နာများတီထွင်မှုကြောင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။ ဥပမာသူလျှို Camera အမှားရှာဖွေစက်အချက်ပြ / မှန်ဘီလူး / သံလိုက်ရှာဖွေစက် (SPY 995), hidden Anti-Spy Camera ဘာဂ် Detector (SPY999), GPS / SPY ကင်မရာ RF Dual Signal Detector, Range 1-8000MHz, GPS / 1.2G / 2G / 3G / 4G, အဝေးသင် 5-8 (SPY993)။ ဤကိရိယာများသည်လျှို့ဝှက်ကင်မရာကိုလေ့လာရန်အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။
သင်သည်အိမ်၊ ကား၊ ဟိုတယ်သို့မဟုတ်ရုံးတွင်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခံနေရခြင်းရှိမရှိကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသည်သင်၏အပန်းဖြေမှုနှင့်သက်သောင့်သက်သာကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ရှာဖွေမှုသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသော်လည်းလျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးကင်မရာများနှင့်အသံဖမ်းစက်များကိုရှာဖွေရန်သင်လုပ်ဆောင်မှုအချို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအသုံးချရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်သင်၏ကြောက်ရွံ့မှုမည်မျှပြင်းထန်မှုနှင့်သင်၏ရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်ရန်သင်၏နေထိုင်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးလိုသောမည်မျှပေါ်တွင်မူတည်သည်။
မီးခိုးရှာဖွေစက်၊ ဓာတ်ပုံဘောင်များ၊ မီးခွက်များသို့မဟုတ်စာအုပ်များစသည့်သိသာစွာနေရာချထားသည့်အရာများကိုရှာဖွေရန်ထိုနေရာကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်လံရှာဖွေမှုပြုလုပ်ပါ။ အခန်း၏discoverရိယာများကိုပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းဖြင့်ညွှန်ပြနေသည့်အရာဝတ္ထုများကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်ကင်မရာများရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကုလားထိုင်များ၊ စားပွဲများ၊ ဆိုဖာများအောက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသည့်ဖုံးကွယ်ထားသောကင်မရာများ၊ အတွင်းရှိပန်းအိုးများနှင့်အိုးများသို့မဟုတ်ကုလားကာနောက်ကွယ်တွင်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
အခြားပုန်းကွယ်နေသောနေရာမှာအသံဖမ်းစက်များရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ CCTV ကိရိယာများထုတ်လုပ်သော Safe Alarms အားလုံးသည်မီးအားလုံးပိတ်ခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်မီးလုံးငယ်ငယ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဤသည်အသံဖမ်းကိရိယာများအတွက် "ပါဝါအပေါ်" LED ညွှန်းကိန်း၏လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ နောက်ထပ်အကြံပြုချက်တစ်ခုမှာပရိဘောဂအဖုံးများနှင့်နံရံများအတွင်းရှိအစက်အပြောက်များသို့မဟုတ်အပေါက်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နောက်ကွယ်မှကွယ်ဝှက်ထားသောကင်မရာကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက်အပါအ ၀ င်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကိုသင်ပိတ်ထားသင့်သည်။ အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်ဖြင့်လုံခြုံသောလုံခြုံမှုကိုပိတ်ထားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သို့မဟုတ်အလင်းရောင်ရှိသည့်မည်သည့်မီးကိုမဆိုရှာပါ။ ကင်မရာနှင့်နားထောင်ခြင်းကိရိယာအများစုတွင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ (သို့) အလင်းရောင်တပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းကို flush က၎င်းကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဤမီးများသည်မကြာခဏနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲပိတ်ထားနိုင်သော်လည်းအစပြုသူတစ် ဦး သည်စိုက်ထားသည့်စက်ကိုမည်သည့်အခါမျှရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်းသင့်အားမေ့သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရင်ဖွင့်နိုင်သည် မီးပိတ်ထားခြင်းက၎င်းကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
အခန်းထဲမှာရှာဖွေစဉ်အီလက်ထရောနစ်ဆူညံသံများကိုနားထောင်ရန်ကြိုးစားပါ၊ သို့မဟုတ်တီးတိုးပြောပါ။ အသံဖမ်းကိရိယာများစွာသည်လျှို့ဝှက် mode ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှပြုလုပ်သောကလစ်များသည်များသောအားဖြင့်နှုတ်ပိတ်။ မရပါ။ သင်ညှိနိုင်သည့်အီလက်ထရောနစ်အသံအမြောက်အမြားရှိကောင်းရှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသံများကိုအနီးကပ်နားထောင်ပါ။ အကြားအာရုံကိရိယာကဲ့သို့သောအကြားအာရုံကိရိယာတစ်ခုသည်သင်အားများသောအားဖြင့်မတပ်ဆင်ထားပါကအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာနိုင်ငံခြားအရာဝတ္ထု၏အသံကိုအကြားအာရုံကိရိယာကိုယ်နှိုက်ကဆူညံသံနှင့်ခွဲခြားရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းရှာဖွေစက်သည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသူလျှိုထုတ်ကုန်စူးစမ်းသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှု။
အခန်း၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်အထူးသဖြင့်ရောင်ပြန်မျက်နှာပြင်များသို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုထွန်းလင်းပေးပါ။ တစ်ခါတစ်ရံလူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလင်းရောင်အခြေအနေတွင်စောင့်ကြည့်သည့်ကိရိယာများကိုမှန်များ (သို့) အခြားဖန်အမျိုးအစားများနောက်ကွယ်တွင်ဝှက်ထားလေ့ရှိပြီးပုံမှန်အလင်းရောင်အောက်တွင်ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုထိထိရောက်ရောက်ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သော်လည်းအလင်းသည်ထိုအရာပေါ်သို့တောက်ပနေပါကထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ လျှို့ဝှက်ကင်မရာမှန်ဘီလူးမှရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုသင်ရယူနိုင်သည်။ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးတစ်လုံးသည်သင်ရှာဖွေသောနေရာပမာဏကိုကျဉ်းမြောင်းစေခြင်းဖြင့်သင်၏ရှာဖွေမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်၏စူးစမ်းရှာဖွေမှုကိုကူညီရန်ရေဒီယိုလှိုင်းရှာဖွေစက်ကိုသုံးပါ။ ဤလက်ကိုင်ယူနစ်များသည်မှတ်တမ်းတင်ထားသောစက်ကိရိယာများအသုံးပြုသည့်ရေဒီယိုလှိုင်းများကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရာတွင်ကူညီနိုင်သည်။ signal detector သည်လျှို့ဝှက်ကင်မရာမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုအတိအကျမပြောသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်နှင့်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနေရာချထားရန်သင့်အားသတိပေးလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များသည်အသေးစိတ်အတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်ပါသည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အကယ်၍ သင်သည်လျှို့ဝှက်ကင်မရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အချိန်ပိုမိုသုံးစွဲလိုပါကသူလျှိုကင်မရာသို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဖုန်းဝှက်ထားသောနေရာများစွာတွင်သင်ကြည့်နိုင်သည်။ ခရီးသွားခြင်းဆိုင်ရာနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူစာရေးဆရာ Andrew Capelle ကကင်မရာများသည်ကြီးမားသောအရာဝတ္ထုများ၌ဥပမာအားဖြင့်ကြီးမားသောတီဗွီဖန်သားပြင်များ၌မကြာခဏဖုံးကွယ်ထားသည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ သူကပန်ကာများ၊ မျက်နှာကျက်ဆီမီးခွက်များနှင့်အပေါက်တွေစတဲ့ဖုံးကွယ်ထားသောအဓိကနေရာနှစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ရွေ့ပြောင်းနိုင်သောအရာဝတ္ထုများဖြစ်သည့် alarm clock, portable lamp သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းတို့ဖြစ်သည်။
အိမ်၊ ရုံး၊ ကားတို့တွင်အထက်ဖော်ပြပါအထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုရှာဖွေခြင်း၏အကြံပြုချက်များနှင့်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသွားပါမည်။
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းရှာဖွေစက်၏အကူအညီဖြင့်အီလက်ထရောနစ်သူလျှိုကိရိယာအတွက်အခန်း၊ ကား၊ ရုံးခန်း ၀ ယ်နည်း
လျှို့ဝှက်နားထောင်သည့်ကိရိယာများသို့မဟုတ် bug မ်ားကိုအစိုးရမှသာမကအခြားသူများကိုစူးစမ်းလိုသူသို့မဟုတ်သူလျှိုလုပ်လိုသောစီးပွားရေးသမားများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီမှအသုံးပြုသည်။ အချို့သောကိရိယာများသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သော်လည်းစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များနှင့်ရေဒီယိုအချက်အလက်များအပေါ်မှီခိုရခြင်းကြောင့် bug အများစုကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်၏အိမ်၊ ရုံး (သို့) ယာဉ်တွင်နားထောင်သည့်ကိရိယာကိုတပ်ဆင်ထားပါကဖြေရှင်းနိုင်ရန်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အားလုံးကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ဒေသတွင်းရှိရေဒီယိုလှိုင်းများကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
သင်ရှာဖွေနေသောအခန်းထဲရှိအဖွင့်အပိတ်ပြားများနှင့်ပြားများကိုပြောင်းပါ။ သင်ပန်းကန်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းနောက်ကွယ်မှနံရံ၌ဝါယာကြိုးများပါရှိသည်။ ဤတွင်းများသည်ကိရိယာများကိုဖုံးကွယ်ရန်အတွက်အဓိကနေရာများဖြစ်သည်။ အခုဆိုရင်သင်၏လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုနံရံရှိအပေါက်တစ်ပေါက်စီထဲထွန်းလင်းပါ။ သငျသညျဝါယာကြိုးအတွင်းပိုင်းသာကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ သံသယဖြစ်ဖွယ် (သို့) နေရာမရွေးဖြစ်နေသောအရာတစ်ခုကိုသင်သတိပြုမိပါကမည်သည့်အခါမျှမထိပါနှင့်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်တွေ့ရှိခဲ့တာကိုပြောပြပါ။
အခန်းထဲရှိအခြားမည်သည့်လက်လှမ်းမီနိုင်သည့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုမဆိုဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ တနည်းကား, သင်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင်, ရဲကိုခေါ်ပါ။
သင်၏ Radio Frequency (bug) detector ကိုဖွင့်ပြီး dial-up ကိုလှည့်ပြီးချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထားပါ။ လျင်မြန်စွာသွေးထွက်သင့်သည်။
အဆိုပါရေညှိလုံးဝရပ်သည်အထိပြန်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း detector အပေါ် dial ကိုပြန်ဆင်း။
ရေဒီယို frekwency detector ဘေးတွင်ရပ်နေစဉ်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့အခြားဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာနောက်တဖန် beeping စတင်သင့်ပါတယ်။
ဆဲလ်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုဖွင့်ထားစဉ် 10 အကြောင်းရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းရှာဖွေရေးကိရိယာမှပေ 12 သို့ရွှေ့ပါ။ ရှာဖွေတွေ့ရှိသူသည်တစ်မိနစ်လျှင် 160 နှုန်းဖြင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်တီးမှုတ်သင့်သော်လည်းပိုမိုတဖြည်းဖြည်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ အကယ်၍ တစ်မိနစ်လျှင် 120 သည်တစ်စက္ကန့်လျှင်နှစ်ချက်နှုန်းထက် ပို၍ နှေးကွေးသည်ဆိုပါက dial-up ကိုအတန်ငယ်လှည့ ်၍ ၎င်း၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ တစ်မိနစ်လျှင် 160 ထက်ပိုမိုမြန်လျှင်ရိုက်လျှင် dial ကိုအနည်းငယ်နှိမ့်ထားပါ။
ရေဒီယိုလှိုင်းရှာဖွေစက်ကိုအခန်းအတွင်းရှိအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းအားလုံး၏အပြင်ပန်းများကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေ့။ ၊ ပစ္စည်းတစ်ခုစီမှ ၂ ပေခန့်ဝေးသောရေဒီယိုလှိုင်းရှာဖွေစက်ကိုထားရှိပါ။ စဖွင့်လာပါကသင်စကင်ဖတ်နေသောကိရိယာကိုပိတ်ပြီးပြန်စစ်ပါ။ အကယ်၍ Radio Frequency detector သည်ဆက်လက်လျင်မြန်စွာဆက်လက်လျှံနေလျှင်သင် bug တစ်ခုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအခန်းထဲရှိလျှပ်စစ်မဟုတ်သောအရာများနှင့်အတူထားပါ - ဖိုင်တွဲဗီရိုများ၊ စားပွဲခုံများ၊ ကုလားထိုင်များစသဖြင့် - နောက်ဆုံးတွင်နံရံများနှင့်အတူ။ ရေဒီယိုလှိုင်းရှာဖွေစက်မှအသံတစ်ခုတည်းကသင်အမှားတစ်ခုတွေ့ပြီဟုမဆိုနိုင်ပေ။ ရေဒီယိုအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုကိုညွှန်ပြမည့်အစာရှောင်ခြင်း၊
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အိမ်၊ ဟိုတယ်အခန်း၊ ငှားရမ်းခနှင့်ကားများရှိတစ်နေရာရာရှိကင်မရာများကိုဖုံးကွယ်ထားပါက၎င်းသည်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးသင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာသင်လုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီများမှအီလက်ထရောနစ်စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများအရ၎င်းတို့သည်စာရင်းများရှိစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများကိုထုတ်ဖော်ရန်အိမ်ရှင်များလိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင်အချို့သောပုဂ္ဂလိကနေရာများ၏အတွင်းပိုင်းကိုအိပ်ခန်းများနှင့်ရေချိုးခန်းများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေစစ်ဆေးခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ သူတို့ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိ၏။ book ည့်ခန်းထဲမှာမ ၀ ယ်ခင် camera ည့်ခန်းထဲမှာ nanny ကင်မရာတစ်စုံတစ်ရာဖော်ပြခြင်းအတွက်သတိပေးစာရင်းကိုအားလပ်ရက်အငှားစာရင်းမှာသင်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းသေချာပါစေ။ အကယ်၍ သင်၏အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်း၌တစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါကချက်ချင်းထွက်ခွာပြီးကုမ္ပဏီအားပြောပြပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းရှိလျှို့ဝှက်ကင်မရာတစ်လုံးကိုတွေ့လျှင်အခန်းတစ်ခန်းပြောင်းရန်တောင်းဆိုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်စောင့်ကြည့်ထုတ်ကုန်သည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Lawson ၏လျှို့ဝှက်ကင်မရာများသည်ရဲအာဏာပိုင်များအကြားကွဲပြားသည်။ အခြေအနေတော်တော်များများမှာတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုမသိဘဲနဲ့မင်းကိုမှတ်တမ်းတင်တာကတရားမ ၀ င်ဘူး။ နည်းပညာဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကင်မရာများနှင့်နားထောင်ခြင်းကိရိယာများသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု၊ သေးငယ်မှုနှင့်အလွယ်တကူဖုံးကွယ်နိုင်ခြင်းများရရှိခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့်မှုများပြုလုပ်လိုသူမည်သူမဆိုအတွက်ဤအရာသည်ကြီးမားသော်လည်းအထီးကျန်နေသည့်အချိန်၌တောင်မှမျက်လုံးမှလုံခြုံမှုခံစားရရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုနှေးကွေးစေသည်။ ဥပမာအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအားဖြင့်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းရဲများအနေဖြင့်၎င်းကိရိယာများကိုတရား ၀ င်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲစိုက်။ မရနိုင်ပါ။ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ပုဂ္ဂိုလ် - လျှို့ဝှက်ကိရိယာများကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်ကိုသိခြင်းသည်သင့်အား၎င်းတို့အားကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောဥပဒေများထက် ပို၍ တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။
သင်၏ privacy ကိုထိခိုက်ခြင်းဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေသည်ကိုသင်တွေ့ပါကအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်မီဒီယာများအတွက်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ရှိပါကရဲကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။ မည်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပရိဘောဂများကိုမချိုးဖောက်မိစေရန်သေချာစွာဂရုစိုက်သည့်အခန်းတစ်ခန်းကိုသင်ရှာဖွေသင့်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်ဟိုတယ် ၀ န်ထမ်းများနှင့်စကားများသည့်အငြင်းပွားမှုများကိုရှောင်ရှားပါ။
လျှို့ဝှက်ကင်မရာများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံမဟုတ်ပါ။ Advanced Operational Concepts ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်အထူးအင်အားစုများနှင့် Green Beret တို့၏စစ်သားဟောင်းသည်ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာတွင်အစိုးရထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များကစီးပွားရေးခရီးသွားများလာကြသည့်ဟိုတယ်များကိုတက်ကြွစွာစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုရှုမြင်သည်။ ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သူတို့နေရာထိုင်ခင်းအတွင်းရှိလျှို့ဝှက်ကိရိယာများကိုရှာဖွေရန်မည်သူမဆိုခြိမ်းခြောက်နေသောထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခံရပြီးဖြစ်နိုင်သမျှကုသမှုခံယူနိုင်သည်။ ဤနိုင်ငံများသို့အနည်းဆုံးစျေးအနိမ့်ဆုံးရှာဖွေရေးကိရိယာများကိုပင်သယ်ဆောင်လာခြင်းအားဖြင့်ခရီးသည်များကိုလေပူဖြင့်မထွက်ခင်ရေပူထဲတွင်ဆင်းသက်နိုင်သည်။
5440 စုစုပေါင်း Views စာ3Views စာယနေ့တွင်